ओली सरकारले कर तिर्न नसक्नेलाई कर नलिने !::Pathivara News
ओली सरकारले कर तिर्न नसक्नेलाई कर नलिने !
सरकारले कमाउने र तिर्न सक्नेलाई मात्रै कर लगाएर तिर्न नसक्ने करको बोझमा नपारेको प्रष्टिकरण
काठमाडौं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले तीर्न नसक्नेलाई सरकारले करको बोझ नलगाउने प्रष्ट पार्नुभएको छ । र्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम भएकोे भन्दै अफवाह फैलाएर सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई सरकारले कर नलगाइएको र नलगाउने प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
‘सरकारले कमाउने र तिर्न सक्नेलाई कर लगाएको छ, तिर्न नसक्ने जनतालाई करको बोझ छैन, लगाइन्न,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले एकाध बिचौलियाले सरकारबिरुद्ध अभियान छेडेको र त्यही योजनाका आधारमा तिर्न नसक्ने जनतामाथि कर थोपरेको अफवाह फैलाएको संकेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई कडा निर्देशनसमेत दिनुभयो । ‘कानुन नबनाई कर असुली नगर्न सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, पहिला कानून बनाउनोस, अनि मात्रै कसर असुली गर्नोस,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।
उहाँले दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर असुल नगर्न पनि मातहतका सवै निकायलाई सचेत गराउनु भयो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप कर असुलीको काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको कामलाई अगाडि बनाउन कर लिने गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भयो